I-Pradnik Valley Lodge / kufuphi neKraków
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguPiotr
Ifumaneka kwiPaki yeSizwe yaseOjców, iPradnik Valley Lodge ibonelela ngendawo yokuhlala ekumgangatho ophezulu emaphandleni. Amagumbi akhoyo aneen-suite zale mihla zokuhlambela. Kukwakho nekhitshi elihlangeneyo elinendawo yokuphumla ebanzi.
Ifumaneka kwi-Ojców National Park (i-Ojcowski Park Narodowy), i-Pradnik Valley Lodge ibonelela ngendawo yokuhlala ekumgangatho ophezulu emaphandleni. Amagumbi akhoyo aneen-suite zale mihla zokuhlambela. Kukwakho nekhitshi elihlangeneyo elinendawo yokuphumla ebanzi.
Indawo entle yokukhwela ibhayisekile kunye nokukhwela intaba.
Ifumaneka ngokulula kwimizuzu engama-20 ukusuka eKraków.
Ukusuka eKrakow, iPradnik Korzkiewski yindawo yokuqala eyinxalenye ye-Ojcowski National Park. Yindawo enoxolo, inamahlathi amaninzi kunye namawa enza imizobo enika umdla. Yindawo entle yokuhamba ngeenyawo okanye ngebhayisekile kwiNtlambo yasePradnik kunye neKorzkiew engummelwane, iWierzchowska Górna Cave kunye neBędkowska Valley.
I-Pradnik Valley ikwayenye indlela eluhlaza kwabo bahlola iKrakow. Umbindi wesixeko awukho ngaphezu kwemizuzu engama-30 ngemoto esuka ePradnik Valley lodge (imizuzu engama-20 ngaphandle kwetrafikhi).